D.G.B.G. Indawo yokuhlala eKingman Park w/ Indawo yokupaka yasimahla!
Zive njengomhlali we-DC endaweni yomkhenkethi onokufikelela ngokupheleleyo kwigumbi lethu leendwendwe elingaphantsi, eliquka indawo yokupaka egqunyiweyo ngaphandle kwesitalato kunye nendawo yokungena eyahlukileyo. I-suite inebhedi enkulu, indawo yokuhlala kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Yonwabela ikofu yakusasa ngelixa ucwangcisa usuku lwakho. Thatha ithuba le-DC Streetcar yasimahla yokukhwela ukuya kwiSikhululo soManyano kunye nazo zonke iindawo ezinomdla zokutyela nokusela kwi-H Street NE. Ifakwe kufutshane neSiqithi esizolileyo saseKingman esigcwele iindlela ezintle zendalo.
Le mayibe sisiphehlelelo sakho kuhambo oluhle lokuya kwikomkhulu lesizwe kwindawo yethu entsha nephuculweyo! NgoDisemba ka-2019, savala iinyanga ezimbini zokuhlaziya. I-suite ngoku ine-mini-split ezimeleyo ukutshisa kunye nokupholisa umgangatho. Sikwafakele imilinganiselo yokuqinisekisa isandi ukuphendula ingxelo yeendwendwe.
Besisoloko sifumana ukuphononongwa okuphezulu malunga nokucoceka kwendawo yethu. Nangona kunjalo, ngenxa ye-coronavirus, sithatha inkathalo eyongezelelweyo yokubulala iintsholongwane kwindawo ehlala iphathwa phakathi kogcino. Nceda uqhagamshelane nathi ukuba unomdla wokuhlala ixesha elide (iveki enye okanye ngaphezulu) kwaye sinokuxoxa ngesaphulelo.
Unesango lakho lokungena elahlukileyo kunye nendawo yokupaka yabucala egqunyiweyo. Yonwabela igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa, ibhedi kunye nomabonakude, kunye nebhedi enkulukazi. I-couch ikhupha ibhedi egcwele ubungakanani esivumela ukuba sikwazi ukuhlalisa iindwendwe ezine. Sibonelela ngefriji encinci, imicrowave, kunye nomatshini wekofu kunye nekofu kunye neti. Asiboneleli ngekhitshi kodwa oko kuthetha nje ukuba unexesha elingakumbi lokonwabela yonke into esinokuyinikwa sisixeko!
4.78 · Izimvo eziyi-164
Suka kwindlela yabakhenkethi ngokuzinza e-NE DC. I-Kingman Park yindawo yokuhlala yeCapitol Hill kwaye ikufutshane nazo zonke izenzo (iibhari, iindawo zokutyela, imiboniso) kwisitalato i-H kunye neendlela ezintle zokubaleka kunye neebhayisekile ecaleni koMlambo i-Anacostia eziya kukuthatha ukuya kwiYadi yaseNavy, apho unokubamba khona. umdlalo weNational baseball ngexesha okanye uzame indawo yokutyela ebalaseleyo. Sikwakufuphi ne-US Capitol kunye ne-National Mall kunye ne-plethora yayo yeemyuziyam zamahhala.
Iqabane lam uRandy kunye nam sihlala ngokudibeneyo e-DC iminyaka engaphezu kweshumi elinesihlanu kwaye siyasithanda isixeko. Siyazithanda iindwendwe ezibuk’ iindwendwe kwaye sizele zizindululo zezinto ezipholileyo nezingekhoyo ekufuneka zenziwe apha, kuquka iimyuziyam ezintle, iindawo ezithengisa utywala, iindawo zokutyela, iindlela zokuhamba ngebhayisekile, kunye nemisitho eyonwabisayo. Sazise umdla wakho kwaye siyavuya ukwenza iingcebiso.
Iqabane lam uRandy kunye nam sihlala ngokudibeneyo e-DC iminyaka engaphezu kweshumi elinesihlanu kwaye siyasithanda isixeko. Siyazithanda iindwendwe ezibuk’ iindwendwe kwaye sizele…